Caalamka Online » BREAKING NEWS: Shacabkii ugu badnaa Somaliland oo Garoowe xuni ku haysato & Puntland oo warkii ugu cuslaa kasoo saaray Xuduudaha ay la wadaagto…….
BREAKING NEWS: Shacabkii ugu badnaa Somaliland oo Garoowe xuni ku haysato & Puntland oo warkii ugu cuslaa kasoo saaray Xuduudaha ay la wadaagto…….
January 9, 2018 - Written by Maxamad Cabdi - Edited byMaxamad Cabdi
Xilli maalintii shalay ahayd uu kaga dhawaaqay gudaha magalada Garoowe ee caasimada Puntland gudoomiyaha gobolka Nugaal Cumar Fara weyne Cunaqabatayn culus oo ku aadan maamulka Somaliland ayaa waxaa xaalad jaah wareer ah ay ku haysataa magaalada Garoowe shacabkii ugu badnaa ee kasoo jeeda deegaanada maamulka Somaliland.
Qaar kamid ah dhalinyaro u safri lahaa dalka Qadar si ay uga mid noqdaan barnaamijka askaraynta Qadar ee dhalinyarada Soomaaliyeed lagu daad guraynayo oo la hadlay Warsidaha Puntlandnews.net ayaa sheegay in xaalad aad u culus ay ku sugan yihiin isaga iyo dhalinyaro aad u tira badan oo magaalada Garoowe kasoo doontay qaadashada Passaport-ka dalka.
Wiilkan dhalinyarada ah oo magaciisa kusoo koobay Mukhtaar Axmed ayaa sheegay in guud ahaanba ay ka go’day isaga iyo dhalinyaro kaleba sahaydii iyo qarashaadkii ay u qorsheeyeen in ay ku joogaan gudaha magaalada Garoowe isla markaasna noqoshahoodii deegaanada Somaliland ay soo food saartay caqabad xoogan maadaama maamulka gobolku uu mamnuucay in la iskaga kala gudbo deegaanada Puntland iyo Somaliland.